Mayelana NATHI - Shenzhen Sparky Technology Company Limited
Isungulwe ngo-2018, iShenzhen Sparky Technology izibophezele ekufundeni kwemikhulumiswano yomshini we-AI, ukuhumusha izilimi eziningi, ukuhumusha izilimi eziningi ngesikhathi sangempela ku-inthanethi, kanye nohlelo oluhambisanayo lokuphathwa kwamakhophi kanye nohlelo lokuphathwa kwabasebenzisi.
Le nkampani inezobuchwepheshe obunamalungelo obunikazi be-copyright obungu-8 besoftware, kanye namalungelo obunikazi ayisishiyagalombili wokusetshenziswa kanye ne-patent design design eyodwa.
Ngemizamo eqhubekayo, ithimba lisebenzisa ubuchwepheshe obuklanyelwe ukwenza imikhiqizo ehambisanayo ephula izithiyo zolimi futhi ithuthukise ukusebenza kahle komsebenzi ngokufakwa kwezwi.
Imikhiqizo ekhona yile:
Umshini wokuhumusha we-Artificial intelligence
Incwadi yezithombe ezihlakaniphile yokufunda irobhothi
Idivayisi yokufaka ngezwi efanele ikhompyutha
I-Smart Talkie, okokufaka ngezwi komakhalekhukhwini
ISmart Talkie phakathi kwemikhiqizo engenhla incane futhi ayisindi, futhi ingaguqula kalula okokufaka kwezwi kube umbhalo kunoma yiluphi uhlelo lomuntu wesithathu ocingweni lweselula, noma iguqule okokufaka kwezwi kube umbhalo olimini oluhunyushiwe. Ithuthukisa kakhulu ukusebenza ngokuxhumana komsebenzi wabantu nempilo yabo, futhi ixazulula futhi umgoqo wolimi wokuxhumana phakathi kwabokufika. Kusebenza kakhulu.
Sizoqhubeka nokusebenza kanzima ukuze siqoqe ikhophasi ethe xaxa futhi sithuthukise ulwazi lwabantu lokusebenzisa ukuxhumana kwezwi. Ngasikhathi sinye, siyaqhubeka nokwenza imikhiqizo yokuxhumana ngezwi yokuhlakanipha okufakelwayo, njengokuqashelwa kolimi lwezandla, ukusiza abantu abayizithulu ukuxhumana nabantu abajwayelekile.